Browsing by Subject "Zimbabwe"
Analysis of genetic relationships of pearl millet (Pennisetum glaucum L.) landraces from Zimbabwe, using microsatellites ﻿
Chakauya, E; Tongoona, P (Academic Journals inc., 2008)
Pearl millet (Pennisetum glaucum L.) is the fifth most important cereal crop in Zimbabwe, with great potential in food security and biofuels. However, the rich pearl millet genetic diversity is either partially characterised ...
Morphological variation of sorghum landraces from semi-arid areas of Zimbabwe ﻿
Mujaju, C; Chakauya, E (2008)
Sorghum (Sorghum bicolor) is one of the most important cereal crops cultivated in, the semi-arid areas of Zimbabwe where persistent drought, high temperatures and poor edaphic conditions are endemic. Because of their ...
Rural electrification in Zimbabwe reduces poverty by targeting income-generating activities ﻿
Mapako, M; Prasad, G (2007-04)